သုံးစွဲသူများသည်မီဒီယာအခင်းအကျင်းသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ထင်မြင်ကြသနည်း။ | Martech Zone
သုံးစွဲသူများသည်မီဒီယာအခင်းအကျင်းသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ထင်မြင်ကြသနည်း။
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 3, 2015 Douglas Karr
တောင်းတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားစရာ quandry ရှိတယ် တုံ့ပြန်ချက် အမှန်တကယ်စုဆောင်းနှိုင်းယှဉ်စစ်တမ်းတစ်ခုမှတဆင့် အပြုအမူ။ အကယ်၍ စားသုံးသူတစ် ဦး ဦး ကိုသူတို့ကြိုက်သလားကြော်ငြာကိုကြိုက်လားဟုသင်မေးလျှင်၊ ရွေးချယ်ခံရသူအနည်းငယ်ကသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဟုတ်နောက်လာမည့်ကြော်ငြာများပေါ်ထွက်လာမည့်နောက်လာမည့်ကြော်ငြာကိုသူတို့မစောင့်နိုင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အထက်သို့တက်သွားလိမ့်မည်။ အဲဒီလူကိုငါတကယ်မတွေ့ဖူးဘူး။
အဖြစ်မှန်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုမ္ပဏီတွေကအဲဒါကိုအလုပ်လုပ်လို့ကြော်ငြာတယ်။ ဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသိရှိခြင်းအတွက်ရေရှည်ဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တိုက်ရိုက်ပြန်မမျှော်လင့်သောနေရာသို့ရောက်နိုင်သည်။ အခြားအချိန်များ၌၎င်းသည်ပြင်းထန်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်လျှော့စျေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ စားသုံးသူတွေကသူတို့ဟာကြော်ငြာကိုမကြိုက်ဘူး၊ ကြော်ငြာကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်တယ်လို့ပြောပေမယ့်၊ ကြော်ငြာကသူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့တုံ့ပြန်နေတုန်းပဲ။
ဒါကစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတုံ့ပြန်မှုကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါသတိထားရုံသက်သက်ပဲ။ Acquity အဖွဲ့မှဤစစ်တမ်း၏ရလဒ်သည်ရိုးရာချန်နယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မီဒီယာလိုင်းအသစ်များအပေါ်စားသုံးသူ၏တုံ့ပြန်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ Facebook သည်ဥပမာအားဖြင့်သတင်းစာကြော်ငြာ၏အခွင့်အာဏာနှင့်နီးသည်။ သို့သော်တီဗွီနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းသည်ဖောက်သည်သစ်များအားကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ဈေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားဆဲဖြစ်သည်။
စားသုံးသူတွေဟာနောက်တစ်ခါ ၀ ယ်ဖို့အတွက် Facebook ကိုမသွားကြဘူးလို့အမြဲတမ်းပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့်စပွန်ဆာပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိပ်တန်ဖိုးထားစရာမလိုပါဘူး။ လျှော့စျေးကထိရောက်မှုရှိနိုင်တယ်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်…စားသုံးသူသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးကိုဂရုမစိုက်ပါ။
Accentity Interactive ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော Acquity Group မှပြောင်းလဲလာသောကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးရှုခင်းတွင်အမှတ်တံဆိပ်ပါ ၀ င်မှုအတွက်၎င်းတို့၏မျှော်လင့်ချက်များအပေါ်အမေရိကန်စားသုံးသူ ၂၀၀၀ အားစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ ၂၀၁၅ နဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မယ့်အလားအလာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဒီဂျစ်တယ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊
အခွင့်အလမ်းများ၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရ၊ သင်၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည် ဆက်စပ်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှု။ အကယ်၍ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်သူတို့လိုချင်သောအရာနှင့်၎င်းတို့အလိုရှိသည့်အခါရရှိလိမ့်မည်ဟုစားသုံးသူများမြင်ပါက၎င်းတို့သည်စာရင်းသွင်းလိမ့်မည်။
အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကိုကူးယူပါ - Acquity Group၊ 2015 နောက်မျိုးဆက်သစ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလေ့လာမှု.
Tags: စားသုံးသူအပြုအမူစားသုံးသူဝယ်လိုအားစားသုံးသူတုံ့ပြန်မှုဖောက်သည်သစ္စာရှိမှုအထူးလျှော့စျေးFacebook ကgeolocationသစ္စာရှိခြင်းအနှစ်တစ်ထောင်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုပုံနှိပ်လူမှုရေး amplificationလူမှုရေးအထူးလျှော့စျေး
Finesse: သွင်း၊ ထုတ်ကုန်၊ ငွေရှာပါ။
မင်္ဂလာဇူလိုင်လ 4th! လူမှုမီဒီယာတွင်မျိုးချစ်စိတ်ဖြစ်ရန်ငွေပေးနိုင်သည်
ရှင်ပေါလု Anderson က
8:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 07
8:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 23
ငါပေါလုသည်လျှော့စျေး၏ပရိတ်သတ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်သင်၏မှားယွင်းသောဖောက်သည်များပေါ်သို့ ၀ င်ပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတန်ဖိုးထားသည်။ သို့သော်လူများက၎င်းတို့သည်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၊ အထူးလျှော့စျေးများသို့မဟုတ်ကူပွန်များမျှော်လင့်နေသောကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနောက်လိုက်ကြသည်ဟုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကဆက်ပြောသည်။
18:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 16 မှာ
ဟေးဒေါက်ဂလပ်စ်, မီဒီယာအသစ် lanscape အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ ၅ ခုသည်သင်မည်သို့ပြောမည်နည်း။
19:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 7, 13 မှာ
၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ငါကထိပ်တန်းကိုတောင်းဆိုဖို့အမြဲတွန့်ဆုတ်နေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့သူတို့ဘယ်လိုအလားအလာကောင်းတွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်နေသလဲဆိုတာပဲ။ အဘို့ မီဒီယာအသစ်:
ဗွီဒီယိုနဲ့အတူလာမယ့်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတချို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Blab။ ပရိသတ်တွေပါ ၀ င်မှုနဲ့ဒီပွင့်လင်းတဲ့ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကိုလုပ်နိုင်စွမ်းဟာထူးခြားပြီးအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်။
Snapchat ဖြစ်ကောင်းလာမယ့်ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းများ၏ယာယီအသွင်အပြင်ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လူများသည်ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာသည်။ သူတို့ပိုလုံခြုံတယ်။
Sysomo ကြည့် ဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်မှုမှာကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုစာသားမှာဖော်ပြမယ့်အစားဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ပုံတွေမှာပြသဖို့နားထောင်ခွင့်ပေးတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုပါ။
im learning ည့်သည်များပြောင်းလဲခြင်းကိုလျှော့ချရန်အတွက်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်နှင့်တင်ဆက်ရန်စက်သင်ယူမှုကိုအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Apple ... ငါကပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် Apple Watch ကကတိပေးပြီး ၀ တ်ဆင်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာပါ။